Sinaanshaha haweenka iyo ragga Soomaalida ee suuqa shaqada | Somaliska
Iyadoo Soomaalidu ay yihiin dadka dhibaatada ugu weyn ay ka haysato soo galitaanka suuqa shaqada Sweden ayaa hadana haweenka Soomaalidu waxay yihiin kuwo si qaas ah arintaan u saameyneyso. Haweenka Soomaalida ayay ku qaadataa mudo dheer in ay shaqo helaan iyaga oo aan u firfircooneyn sida ragga.
Hadaba si arintaas wax looga qabto ayaa kamuunka Umeå waxaa laga bilaabay mashruuc ay ugu magacdareen Somalia kaasoo looga golleeyahay sidii haweenka Soomaalida loola mid dhigi lahaa ragga in ay suuqa shaqada galaan.
“Marka la eego sinaanshaha haweenka soomaalidu way ka hooseeyaan ragga marka laga hadlayo suuqa shaqada. Waxaan dooneynaa in aan midaas wax ka badalno, haweenku waxay doonayaan in ay shaqeystaan waxayna leeyihiin xirfadii” ayay tiri Cecilia Sandén oo hogaamineysa mashruuca.
Goobtii lagu qabanayay bilowga mashruuca ayaa waxaa soo xaadiray dad gaaraya 100 qof iyadoo lagu casuumay cunto Soomaaliyeed. “Maalintaan qiimo weyn ayay leedahay maadaama aan dooneyno in aan isi soo bandhigno oo aan muujino waxa aan qaban karno” ayay tiri Maryam Osman oo ka mid ah dadka ka qeyb qaadanaya mashruucaan.
Kulanka ayaa looga wadahadlay wax badan oo ku saabsan macnaha waxa la yiraahdo sinaanshaha. Cecilia ayaa sheegtay in ay ku adkaaday Soomaalida in ay fahmaan waxa laga wado sinaanshaha.
“Bilowgii aad ayay noogu adkaatay in aan fahansiino micnaha sinaansho balse wadahadal dheer ka dib waa fahmeen in sinaanshuhu yahay in ragga iyo dumarku ay yeeshaan xuquuq isku mid ah, fursado isku mid ah iyo masuuliyad isku mid ah ” ayay tiri Cecilia Sandén.
Bashiir Ben Macalin says:
Gabadhaha Muslimiinta ahoow , Masuuliyadu isma Saarna , Shaqaysta , waxna Barta , Allaha idinku anfaco .
Balse walaalaheeygoow Masuulida Guriga idinka Saaran ha dayicina , Shaqado yaysan noqon , mid aad ku dayacdaan , Waajibka Guryaha idinka saaran , iyo shaqo rag ku dhex gashaan.
Islaamka Xuquuqda wuu kala qaybshay , ma reebana gabadhu ineey shaqaysato , balse yaysan noqon Shaqo Xaqii la idin saara aad ku dayacdaan .
Reer Galbeedkuna Sinaanshaha eey wadaan , waa Iska daba Yaacooda oo kALE……..
Waad mahadsan tahay Bahiir waan arin aad u wanaagsan fikirkaaga saliimka ah dumarka soomaaliyeedna waa wax garad mana iloobi doonaan mas,uuliyadooda
aad baan usoo dhaweynayaa aniga lycka till.
shaaqadiina mooye ka fadhista suqa dumarka somaliyed waxa laga joogi wayay dhibkii eey ku hayen raga sa wa kuwii oo lagu yiri suqa gala anigo waxan u arka sweden waxay mashquul ku wada dumarka somaliliyed ee kama ahaaa wax kurorsada haday wax wanaga nala doonayan hana mideyan waxa naga maqan odayasheeni iyo caruurteni
November 26, 2011 at 19:46
asc ragu maxay ka baqayaan cajeradi yareed ee walaaqi jireen in aay luuq ka gasho shaqada guriga yaa la ilaabin kulahaa walal hala sin naado oo wax ha lawada qabsado camal mahan guriga in lagu calaacalo mahan aniga waxaan oran lahay dumar shaqeesta ragiina ha shaqeesteen meshaa waa qurbo gacmo wada jir bee wax ku qabsan karayaan wa bilaahi toofiiq
Bashiir Ben Ali says:
Ku: Mahaday Alle s.w.t ayaa qolo walba Hawsha Bulshada meel uga aadiyay .
OGAAW aakhiro maxaad reerkla ugu shaqayn wayday Gabadha la dhihi maa , reerka dayaceey dayacdayse waa la waydiinaa ,
Teeda kale Hala sinaando ayaa tiri : Ma waxaa u aragtaa Sinaansho la’aan in Odayga Reerka u soo shaqeeyo , Hooyadu Guriga ku cilmi barato haddii awlaad u joogtana Tarbiyaydo “
Haddiise suuqa loo wada cararo , waxaa kula habboon miyaa in caruur 2 jira XANAANO 8 subaxnimo lagu tuuro 16 galabnimana laga keeno , iyadoo intaa islaan gaalo ah tarbiyaynayso ??
ee Xiligaa gurigii Hooyadii , aabihii , caruurtii oo wada tacbaana guriga kusoo wada daataan , subaxda kalena sidaa u wada yaacaan .
TAAAAAAAAAAAAS NOLOL MAAHAN , sinaanshana maahan , horumarna maahan.
ASC. BASHIIR BEN MACALIN mahadsanid bro.waa rayi wanaagsan oo diin islaam ku saleysan anaga iyo haweenkeenaba iyo awlaadeenaba allaha xaqa na waafajiyo oo towbada iyo toowfiiqda haana tuso.
November 27, 2011 at 18:48
Hooyadu cunto ayay karinaysaa.Hooyadu guriga ayay hagaajinaysaa.
Dharka ayay ka ururinaysaa.
Sariirta ayay gogsha. dumarko hashaaqayan waa loobahaya in ayaa dhafan ragga, see halilawen caruutin ok.
November 27, 2011 at 18:49
waaxa sheekasanya digagaad yaar
iyo bisad iyo jiir. waxa yidha sidan.inkasato halaka luugutagali sheeko
Digaagad yar baa heshay xabbad haruur ah.
Waxay tidhi, “Waxaan helay xabbad haruur ah. Yaa raba in uu falo haruurka?”
Jiirkii wuxuu yidhi, “Anigu ma rabo.”
Bisaddii waxay tiri, “Anigu ma rabo.”
Ridiina waxay tiri, “Anigu ma rabo.”
Digaagaddii yarayd baa tiri, “Aniga ayaa raba.”
Markaa, waxay fashay haruurkii.
walaal dhamaan waad mahansan tihiin. Qaasatan wiilka Bashiir ladhaho waana sax in uu “Allah caza wajala”.uu markii horeba hooyo iyo Aabe isku shaqo kadhigin.
Teeda kale walal hooyada banaanka ha,aa,ubaxdo laleeyahay dhaqotan aabaha ka badanayay haysaa oo shaqo debada ay gurigeeda uagabaxayso looma baahna.
Walaal “Khadar” Dhalanteedka Reer galbeed Ama ay gaalo wado yuusan kulatagin!
oo ladamacsan yahay in Reeraha is haysta lagu burur buryi anagu Alxamdullilaah.
Allah diin iyo dhaqan iyo iimaan ayuu nasiiiyay dadbana lama siin waa inaad saas kufakartaa.
wax kaamaqan malahay Xeerka qoskana waakii Uu Illaahay dajiyay!
Walaal dhamaan waad mahansan tihiin. Qaasatan wiilka uu magiciisu yahay Bashiir waana ku raac sanahay waayo.waxaa sax ah in uu “Allah caza wajalah” markii horeba uu hooyo iyo Aabe isku shaqo kadhigin.
Teeda kale walal hooyada banaanka ha,aa,ubaxdo laleeyahay shaqo tan aabaha ka badan ayay haysaa oo guriga kahaysaa, shaqo ay debada ay gurigeeda ugabaxayso looma baahna.
Walaal “Khadar” Dhalanteedka Reer galbeed Ama ay gaalo wadato yuusan kulatagin!
oo ladamacsan yahay in Reeraha is haysta lagu bur buryo anagu Alxamdullilaah.
Allah diin iyo dhaqan iyo iimaan ayuu nasiiiyay .Dadbana lama siin waana inaad saas kufakartaa.
wax kaamaqan malahay Xeerka qoska waana kii Uu Illaahay dajiyay oo islaamka kuyaal!
waayaa ka dib maxadhacay
waa mahadsantihiin. Anaga haddan dad muslim ah nahay waxaa nalaga rabaa inaan samcan wadaacan niraa wixii allah iyo suubanuhu na amreen. Waxaa muhim ah in ninka iyo naagtu is ixtiraamaan oo howsha sida alle ugu qeybiyey u qeybsadaan. Biilka nin ayaa laga rabaa guriga ka warqabkiisana hooyada ayaa laga rabaa. Howsha gurigana waa iney iska caawiyaan. Xaaskeyga ilaa maalintii ay ii timid ilaa hadda waligeed kron ceyr ah ma aysan qaadan oo anigaa reerka u shaqeeyo howsha gurigana waa ka caawiyaa. Howsha guriga ayaa ka dhib badan tan kale ee ragow dumarka ha la caawiyo idinkaa ka múrqo waaweyne.
ASC Carada iyo cerbaha shiisha iyo Dhamal calooshiisa. Cudbi koriye ceeriga Burraho cadayga Laasdhuure. Cadaadley carfigaa Tuuyo iyo culayga Maygaagta Casaha Sheekh caleenti Burco iyo cogalka Oodweyne. Caglishiriye Ceeg iyo Togdheer harada Ceegaagta Cayanabo cadaankii Taleex Cal iyo Buur Dhaabo Halki iyo Ceerigaabiyo badiyo kuraha cawlcawlan Cagaarweyne coodiga Wardheer Caado iyo faafan Cosobkiibiyeed iyo Gurracan Ceelqod iyo Baarta
Curcurrada Awaare iyo Deyr cawska Digaweyne
Cufka Aroor Calaydh iyo Balaadh Cawlal iyo Qaydar
Ceelkaa Hargaysa iyo Togaan cidii ka guuraynin udubkaa cidhiidhiga u degey ma cidkalaad mooday saw cududda Habar Yoonis iyo Ciidagale maaha
salwa qazaali says:
dhaman arkhristyasha soomaliska waxan ada ugu faraxay hadalkan adaka uu qiimaha badan e uu inderkay khadar so galiyay halkan iyo dhulka adaka u qaniga e fican ee u so sheegay iyo cida deganka u leh intan midan waxa bena kamu sheegin
cidi garanaya uun ba garanay doqona lo sheegi mayo
vi´va burco togdher
halak kaga hay khadar thanka
salan dhaman wallahay
dumaraka soomaliyed sharaf bay lahan jiray oo lagu dhaqmi jiray laguna yaqanay lakin se hada waxay waxan la shegayo
raga iyo dumarka ilahay mu simin
dumarka waxa lagu talao galay inay noqodan hooyo iyo marwo guuriga joogta oo reerkeda iyo caruurteda iyo ragoda ka shaqeyan oo kala danbaynti soomaliya iyo ixtiramki laysku lah inay ilaliyan aduunka mel kasat ha ka joogan
xaqiiq way ficantahay gabadha muslimada inay waxa barto lakin waxa fican inaya cilmiga dinta iyo ka madigab barto lakin se raga iyo dumarku isku mid mah
gabdhu waxa way baran karata hada hooyo tahay iyo haday inanta
wanay shaqaysan karata lakinwa inany maranab ka tagin gabdhnimadeda caruurteda iyo gurigada gabadha waxa baratan waxay anfacaysa bulsho dhan bay waxa u qaban karata lakin wa ianaynu ilashan dhaqankeni wacan iyo diinteni wacanyed yurub waxab mah yan caqliga nilka xadin meelksat oo ada joogtan ku fan dhaqankina iyo dintina lbadab wa iga dardaran dumarow
raggow idinkuna dumarka la saiira oo ilashada wa hooyadin wa walshin wa xaskina waxa way baran karan way shaqaysan karan lakin ha candina han magnina oo dhibtada badan ka ilaliya hawashan guurigan ka cawiya
wadamadan yurub ma jirto qof kucawinay sidi somaliya oo wa dhib midhan marak wa inad cawisan xaskin wayo nabiguba c s w uu cawin jiray xasaskisa marka is jilciya ragow oo dumarak cawaiya waliba kuwa qurubaha jooga
dumarkenno wa ubaxa